पदाधिकारी मनोनीत गर्ने तयारीमा देउवा, क–कसलाई रोजे देउवाले ? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं, चैत्र २९ । सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा मानबहादुर विश्वकर्मालाई मनोनीत गर्ने तयारी गरेका छन् । तर, खड्का र विश्वकर्माको नाममा पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ । विमलेन्द्र निधिलाई उपसभापति बनाउने सवालमा भने धेरै विमति नरहेको स्रोतको दाबी छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जारी केन्द्रीय समिति बैठकबाटै पदाधिकारी मनोनीत गर्ने तयारीमा छन् । मनोनयन गर्ने उपसभापति, एक महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको नाम उनले टुंगो लगाइसकेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस सबै जातजातिको भावनालाई समेट्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको होः सभापति देउवा
याे पनि पढ्नुस समवेदना दिन प्रधानमन्त्री र एमालेअध्यक्ष एयरपोर्टबाट सोझै लाजिम्पाटमा
याे पनि पढ्नुस उच्च शिक्षालाई व्यावहारिक शिक्षा अनुकूल बनाउनुपर्छः प्रम
यता सहमहामन्त्रीमा विश्वकर्माको नाम अगाडि सारेपछि एनपी साउद र डा. प्रकाशशरण महतले असन्तुष्टि जनाएका छन् । तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री छँदा महतले आफ्नो छवी बिगार्ने गरी राजदूतमा नाम सिफारिस गरेको भन्दै देउवा पदाधिकारीमा तान्न इच्छुक छैनन् । साउदलाई देउवाले सुदूरपश्चिमबाट उकास्न चाहन्छन् । तर, नेता विश्वकर्मालाई सहमहामन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर १३औँ महाधिवेशनमै आफ्नो गुटमा तानेकाले देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । नयाँपत्रिकाबाट